Yusuf Garaad: Wasiir Maax iyo Danjire Asmamaw - Taxanaha Maxaabbiistii 77 - Qaybta Labaatanaad
Wasiir Maax iyo Danjire Asmamaw - Taxanaha Maxaabbiistii 77 - Qaybta Labaatanaad
Maax (bidix), Anderegg (dhex), Asmamaw (midig)
Howlgalka ICRC ay ku kala wareejineysay maxaabbiista dagaal ee Soomaaliya iyo Ethiopia wuxuu billowday Talaado 23 Agoosto 1988, wuxuuna socday toban maalmood. Inta badan laba dullimaad ayay sameyn jirtay dayaaraddu maalin kasta oo laba jeerna ay Muqdisho ka kaceyso, laba jeerna ay ka soo kacayso Dire Dawa. Laakiin maalmaha qaar waxay sameyneysay saddex duullimaad.
Maxaabiista Soomaalida oo soo degaya
Taxanaha waxaa ka harsan Jawiga gegida dayaaradaha ee Dire Dawa sida uu ahaa soo dhoweyntii loo sameeyay maxaabbista Ethiopian-ka ah ee ku xirnaa Soomaaliya in ka badan toban sano. Waxaa kale oo aan taaban doonaa maxaabbistii Soomaalidu markii ay ku soo laabteen dalka sida loola dhaqmay iyo inta aan ka warqabo waxa ay maanta, 2018, ku sugan yihiin. Waxaa kale oo aan ka warrami doonaa gabar Soomaaliyeed oo ka mid ahayd Maxaabbiista Ethiopia.
Posted by Yusuf Garaad at 08:31:00